2022 က ပိုဆိုးလာနိုင်သေး တယ် ဆိုတာကိုပြင်ဆင် ထားရ မယ်ဆိုတဲ့ 2021 ကရတဲ့ သင်ခန်းစာကိုပြောပြလာတဲ့ ဇာဏ်ခီ – Shwe Likes
ပရိတ်သတ်တွေ နှစ်သက်သဘာကျခဲ့ရတဲ့ ဘိုဆ န်တဲ့ မျက်နှာနဲ့ ဆွဲဆော င်မှုရှိတဲ့ မင်းသား ဇာဏ်ခီကေ တာ့ “ဥပါယ်တံမျဉ်” ရုပ်ရှင်ဇာ တ်ကားြ ကီးနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူ တစ်ယော က်ပဲဖြ စ်ပါတယ်။
ဇာဏ်ခီက လက်ရှိ မှာတော့ အနုပညာအ လုပ်တွေကိုရပ် နားထားပြီး တစ်နိုင်ငံ လုံး စစ်အာဏာရှ င်ပေးသမျှ ဒုက္ခဆင်းရဲတွေကို ပြည်သူတွေနဲ့ အတူတူ မျှဝေခံစား ခဲ့တာပဲဖြစ် ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့ နှစ်သစ် မှာတော့ ဇာဏ်ခီဟာ သူ့အ တွက်တော့ ပျော်စရာမကောင်းတဲ့ နှစ်သစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းကို အခုလိုပဲပြောလာပါတယ်။
“အရှိတိုင်းေြ ပာရရင် Unhappy New Year ပါ။ 2020 တုန်းက “ဒီနှစ်ထက်ဆိုး စရာမရှိေ တာ့ဘူး” လို့တွေးနေတုန်းပဲ 2021 က ၂ဆ တိုးလို့ဆိုးလာ ခဲ့ပါတယ်။ 2021 ကရတဲ့သင် ခန်းစာကေ တာ့ 2022 ကပိုဆိုးလာနိုင်ေ သးတယ်ဆိုတာ ကိုပြင်ဆင်ထား ရမယ်ဆို တာပါပဲ။
“Good things come to those who wait” ထက် “Good things come to those who don’t give up” ဆိုတဲ့စိတ် မျိုးနဲ့ကျနော် တို့အားလုံးခရီး ဆက်ရပါမယ်.. ဆိုတော့ Happy New Year ထက် Happy New Era!!! လို့ပဲပြောပါရစေ.. လာမယ့်နှစ် မှာပြည်သူတွေအား လုံးဆန္ဒပြည့်ြ ကပါစေ🙏❤️🙏” ဆိုပြီး ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဇာဏ်ခီ ကတော့ 2021 ကရတဲ့သင်ခ န်းစာကတော့ 2022 က ပိုဆိုးလာနိုင်သေးတ ယ်ဆိုတာကိုပြင် ဆင်ထားရင်း အကုန်လုံးအတူတူ ခရီးဆက်ကြမ ယ်ဆိုပြီး ပြောလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Source: Zenn Kyi’s fb
ပရိတ္သတ္ေတြ ႏွစ္သက္သဘာက်ခဲ့ရတဲ့ ဘိုဆ န္တဲ့ မ်က္ႏွာနဲ႔ ဆြဲေဆာ င္မႈရွိတဲ့ မင္းသား ဇာဏ္ခီေက တာ့ “ဥပါယ္တံမ်ဥ္” ႐ုပ္ရွင္ဇာ တ္ကားျ ကီးနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သူ တစ္ေယာ က္ပဲၿဖ စ္ပါတယ္။
ဇာဏ္ခီက လက္ရွိ မွာေတာ့ အႏုပညာအ လုပ္ေတြကိုရပ္ နားထားၿပီး တစ္နိုင္ငံ လုံး စစ္အာဏာရွ င္ေပးသမၽွ ဒုကၡဆင္းရဲေတြကို ျပည္သူေတြနဲ႔ အတူတူ မၽွေဝခံစား ခဲ့တာပဲျဖစ္ ပါတယ္။
ဇန္နဝါရီလ (၁) ရက္ေန႔ ႏွစ္သစ္ မွာေတာ့ ဇာဏ္ခီဟာ သူ႔အ တြက္ေတာ့ ေပ်ာ္စရာမေကာင္းတဲ့ ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းကို အခုလိုပဲေျပာလာပါတယ္။
“အရွိတိုင္းေျ ပာရရင္ Unhappy New Year ပါ။ 2020 တုန္းက “ဒီႏွစ္ထက္ဆိုး စရာမရွိေ တာ့ဘူး” လို႔ေတြးေနတုန္းပဲ 2021 က ၂ဆ တိုးလို႔ဆိုးလာ ခဲ့ပါတယ္။ 2021 ကရတဲ့သင္ ခန္းစာေက တာ့ 2022 ကပိုဆိုးလာနိုင္ေ သးတယ္ဆိုတာ ကိုျပင္ဆင္ထား ရမယ္ဆို တာပါပဲ။
“Good things come to those who wait” ထက္ “Good things come to those who don’t give up” ဆိုတဲ့စိတ္ မ်ိဳးနဲ႔က်ေနာ္ တို႔အားလုံးခရီး ဆက္ရပါမယ္.. ဆိုေတာ့ Happy New Year ထက္ Happy New Era!!! လို႔ပဲေျပာပါရေစ.. လာမယ့္ႏွစ္ မွာျပည္သူေတြအား လုံးဆႏၵျပည့္ျ ကပါေစ🙏❤️🙏” ဆိုၿပီး ေျပာခဲ့ပါတယ္။
ဇာဏ္ခီ ကေတာ့ 2021 ကရတဲ့သင္ခ န္းစာကေတာ့ 2022 က ပိုဆိုးလာနိုင္ေသးတ ယ္ဆိုတာကိုျပင္ ဆင္ထားရင္း အကုန္လုံးအတူတူ ခရီးဆက္ၾကမ ယ္ဆိုၿပီး ေျပာလာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Source: Zenn Kyi’s fb
မိသားစုအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတဲ့ တစ်ချိန်က လွမ်းစရာပုံရိပ်တွေကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ပြသလာတဲ့ ငွေတီဦး